भोजपुरमा बलात्कारपछि अाखा गुमाएकी नानीले मुख खोलिन : भिडियो सक्दो शेयर गरौ !! - Enepalese.com
भोजपुरमा बलात्कारपछि अाखा गुमाएकी नानीले मुख खोलिन : भिडियो सक्दो शेयर गरौ !!
इनेप्लिज २०७४ कार्तिक २५ गते १५:५३ मा प्रकाशित
११ गतेको घटनालाई लिएर सखुवा प्रसौनी वार्ड नं ४ को वार्ड अध्यक्षको छोराले सोही ठाउँ बस्ने १६ बर्ष बालिकालाई बलात्कार गरेको कुरा लाई लिएर पीडितले न्याय माँगन जादा उल्टो पीड़क ले पीड़ित बालीका को घर परिवारको सदस्य हरूको अंगभंग हुने गरी कुटेका छन !
सरोकार वालाहरू किन मौन छन ?अहिलेसम्म पीड़कलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन !
के हाम्रो समाजमा गरीब निमुखा हरुलाई ईमानदारपूर्बक बाच्ने अधिकार छैन ?
सरोकरवाला र अधिकारकर्मी साथीहरु किन मौन छ?
पीडितले न्याय पाऊनै पर्छ र पीड़कलाई दण्ड सजाय हुनई पर्छ !